Ilungelo lase-US lokwazi amaSebe kaRhulumente amaXwebhu malunga neMvelaphi ye-SARS-CoV-2-Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Novemba 30, 2020 by UGary Ruskin
Ukukhutshwa kwangoko: NgoMvulo, Novemba 30, 2020
Ukuqhagamshelana Nolwazi: UGary Ruskin (415) 944-7350 okanye USainath Suryanarayanan
Ilungelo lase-US lokwazi, iqela eliphanda ngophando elingenzi nzuzo, wafaka ityala namhlanje ngokuchasene neSebe laseMelika laseMelika ngokuphula umthetho we-Freedom of Information Act (FOIA).
Eli lityala lesibini le-FOIA elifakwe yi-USRTK njengenxalenye yemizamo yokufumanisa into eyaziwayo malunga nemvelaphi yenoveli ye-coronavirus SARS-CoV-2; umngcipheko weelebhu zokukhuseleka; kunye nophando lomsebenzi, olufuna ukwandisa ukosuleleka okanye ukubulawa kwezifo ezinokubangela ubhubhane.
Isimangalo sanamhlanje, esifakwe kwiNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMantla saseCalifornia, sifuna amaxwebhu eSebe likaRhulumente kunye nembalelwano ne-Wuhan Institute of Virology yase China, iZiko lase-Wuhan loLawulo lweZifo noThintelo, kunye ne-EcoHealth Alliance, ebibambisene nayo yaxhasa ngezimali IZiko leWuhan leVirology, phakathi kwezinye izifundo.
Ityala elitsha lilandela enye efakwe yi-USRTK ngo-Novemba ka-5 ngokuchasene namaZiko ezeMpilo kaZwelonke ngenxa yokusilela kwayo ukubonelela ngeerekhodi malunga nemvelaphi ye-SARS-CoV-2. Ukusukela ngoJulayi, i-USRTK ifake iirekhodi zikarhulumente ezingama-43, zomdibaniso, nezamazwe aphesheya ezifuna ulwazi malunga nemvelaphi ye-SARS-CoV-2, kunye nemingcipheko yeelebhu zokutya kunye nophando lomsebenzi.
I-SARS-CoV-2 yintsholongwane ebangela isifo i-Covid-19.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nophando lwe-USRTK, jonga "Kutheni siphanda ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2, iilebhu ezikhuselekileyo kunye nophando lwe-GOFKunye noluhlu lokufunda kwi "Yintoni imvelaphi yeSARS-CoV-2? Yeyiphi imingcipheko yophando lomsebenzi?"Amanye amanqaku avela kuphando lwe-USRTK abandakanya"Umbutho we-EcoHealth Alliance wenza amalungiselelo esiteyitimenti sososayensi “ngemvelaphi yendalo” ye-SARS-CoV-2, ""Ukunyaniseka kwezifundo eziphambili kwimvelaphi yecoronavirus ngokungathandabuzekiyo; Ijenali zesayensi eziphanda, ""Indalo kunye ne-PLoS Iintsholongwane zibonakalisa ubunyani besayensi kwizifundo eziphambili ezidibanisa i-pangolin coronaviruses kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2,"Kwaye"Isazinzulu esinongquzulwano lomdla esikhokelayo Lancet I-COVID-19 ikhomishini kwi-virus imvelaphi. "
I-USRTK imelwe kwityala leSebe likaRhulumente nguDaniel C. Snyder weeOfisi zoMthetho zikaCharles M. Tebbutt, PC, kunye noLaura Beaton weShute, Mihaly & Weinberger LLP.
Ilungelo laseMelika lokwazi liqela lophando eliphambili elijolise ekukhuthazeni ukungafihli kwempilo yoluntu. Ngolwazi oluthe kratya, bona usrtk.org.
IiBiohazards, Ukukhutshwa kweendaba
Umhleli wephephancwadi odibene neTshayina wafuna uncedo lokuphikisa imvelaphi yelebhu yeCovid-19